Yunaaytid Isteetes Deggersa Sudaaniif Kennitu
Mootummaa ce’umsaa Sudaan kan sivilootaan hogganamuu irraa aangoo fudhuuf yaaliin eega ta’e booda, Yunaaytid Isteetes deggersa mootummaa ce’umsaa Sudaaniif gootuu itti fuuftee jirti.Angawoonni Sudaan akka jedhanti, kanneen prezidaanticha abba irree duraanii Omaar Al Bashiriif amanamoo ta’aantu Fuulbaana 21 aangoo qabachuuf yaalii taasiisan, garu hin miilkoofne jedhu.
Prezidaant Al-Bashiir bara 2019 aangoo irraa kan darbaman yoo ta’u, kunis mormiin karaa nagaa ballinaan gaggeeffame aangoo akka gadhiisan eega gaafatee booda.Al Bashiir yeroo ammaa Kaartuum keessatti hidhamanii, manni murtii yakka qoratuu kan addunyaa inni Heeg jiru, himata duguuggaa sanyii, yakka waraanaa fi gocha gara jabinaa dhala namaa irratti gaggeessuu dabalatee himannaalee kanneen birofis itti gaafatamoo ta’u isaanii ibsuun, ajaja hidhaa irratti baasee jira.
Sudaan waggootii lamaan darbaniif mootummaa ce’umsaa sivilootaan hogganamuun gaggeeffamaa kan jirtu yaa ta’u, biyyattiin bara 2024 jechuun waggaa 3 booda filannoo Deemookraatawaa akka gaggeessituuf hojjataa jira.
Sudaan yeroo ce’umsaa kana keessatti bu’aa deemookraatawaa ta’an akka gonfattu gochuuf mootummaan Yunaaytid Isteetes itti dhiyeenyaan sudaan waliin hojjataa jira.
Waraanni duraanii fi sivilonni harka keessaa qaban, mootummaa ce’umsaa sivilootaan hogganamuu kan Sudaan harkaa aangoo fudhachuuf yaalii isaan godhan, dubbii himaan ministrii dantaa alaa Yunaaytid Isteetes Ned Praayis ibsa baasaniin balaaleeffatanii jiru.
Mootummaa ce’umsaa Sudaan isa biyyatti keessatti ce’uumsa Deemookraatawaa fiduuf hojjatu, Yunaaytid Isteetes deggeruu akka itti fuuftu beeksiiftee jirti.Tarkaanfii farra Deemookraasii ta’e inni akka gaafa Fuulbaana 21 Kaartuum keessatti gaggeeffaee sun, waamiicha uummanni Sudaan bilisummaa, haqaaf fi deggersa addunyaaf dhiyeeffate tuffii keessa kan galchee, akkasumas hariiroo walii Yunaaytid Isteetes fi Sudaan gidduu afaan balaa irra kan buusuu ture jedhan.
Baatii Muddee bara 2020 Sudaaniin tarree biyyoota shoroorkeessummaa gaggeessan jedhaman keessaa baasuu hordofee, Yunaaytid Isteetes mootummaa ce’umsaa Sudaan waiin walta’iinsa qabdu jabeessuu kan itti fufee yoo ta’u , hedduumiina gargaarsa Sudaan dhaqqabuus dabaltee jirti.
Sudaan keessatti imala gargaarsa dhaqqabsisuuf kan hojjatu dhaabbata Tokkummaa Mootummootaa gaggeessaa jiruuf hogganaa kan ta’an Voolkar Pertees gara jalqaba baatii Fuulbaana kanaa gola naga eegumsaaf akka ibsanti garuu, rakkoon Sudaan keessa jiru hedduu dha.
Kunis haala dinagdee rakkisaa ta’e, murtiin haqaa fi itti gaafatamuummaan dhabamuu,fi Daarfuur fi biyyatti bahaa keessatti hokkarri ka’uu dabalatee rakkoo jabaatu jira jedhan.
Kanaaf jecha Sudaan ce’uumsa gara Deemookraasitti gootuu akka itti fuuftuu gochuuf deggersa addunyaa kan wal irraa hin cinneetu ishee barbaachiisa jedhan Partees.
Dubbii himaan ministrii dantaa alaa Yunaaytid Isteetes Need Praayis akka hubachiisanti,Sudaan gama dinagdee fi nageenyaan kaayyoo lafa ka’atte akka fiixaan baafattuuf gochuuf Yunaaytid Isteets qaamoota addunyaa hedduumina qaban waliin gargaarasa guddaa gamasitti ergitee jirti.
Sudaan ce’uumsa gochaa jirtu kana tarkaanfachisaa yeroo deemtuutti nutis deggersa kenninuu jabeessiina kan jedhan Ned Praayis, ce’uumsii kunis gumii seeraa baasuu ijaaruu, bulchiinsa sivilootaa jalatti kutaa naga eegumsaa foyyeessuu fi dhiittaa mirga namoomaa ammaan dura dhaqqaban, murtii haqaa akka argatan akkasumas itti gaafatamuummaan akka jiraatu gochuu dabalata jechuun Praayis dubbachuu isaanii gulaalaan har’a ibsuun yaada isaa xumuree jira.